Mwedzi gumi nembiri muAmerica oak mapipa.
Kupwanya nyoro kana kusavapo kwake, zvinoenderana nehunhu hwemazambiringa Fermentation pakaderera tembiricha (20-24ºC) kuchengetedza hunhu hwehupfumi hwezvakasiyana. Malolactic Fermentation inosangana nehuni.
Kukohwa kwemaoko nekukamurwa kaviri, mumunda wemizambiringa uye patafura yekusarudzika mukamuri. Vinosiyaniswa zvakasiyana nehurongwa, zvichienderana nevhu uye huwandu hwechaibva.
Yakakura cherry ruvara tsvuku, yakadzika, inopenya, inoratidzika nekubvarura kwakanaka uye mharidzo yakanaka. Yakanatswa kunhuhwirira, kwakakura kunoshamisa uko kusangana kusanganisa manzwiro emhando yemhando yemazambiringa uye mipiro yekukwira kwemazuva ano uye akakwana. Kuvapo kwemuchero mutsva wakaibva (mutema, macherari mune doro) achiperekedzwa nezvinonhuwirira nemafuta ebharisamu, chikanda, chikanda nedoro.
Mumukanwa mune waini yakarongedzwa zvakanaka, yakanaka kwazvo uye inoratidza. Yakapfava uye yakavezwa, neinonaka uye inowirirana tannin, waini inodziya asi ine mwero neyakagwinya uye inozorodza acidity, yakanyatsobatanidzwa uye nekupfuurira uye kwakanyanya kupedzisa.